Ngaba i-Itali isiya kwiLockdown yesithathu?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Ngaba i-Itali isiya kwiLockdown yesithathu?
Iindaba zeMpilo • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Umngcipheko wase-Itali wokungena kwisigaba sesithathu se- COVID-19 bhubhane isikhumbuza umhlambi odidekile ulahlekiswa ngumalusi wawo kunye nezinja zakhe.
Ukungathobeli kwenxalenye enkulu yamaTaliyane (ngakumbi abantu abancinci) abangaqwalaseli ukhuseleko olucetyiswayo kwi-COVID-19 ekhutshwa mihla le ziinkokheli zopolitiko, kukhokelele kukonyuka kosulelo lwemihla ngemihla ngoogqirha abaziingcali, ngaphambi kokubhengeza umngcipheko isigaba sesithathu se-COVID-19 sokutshixa.
Nangona kunjalo, ukungathobeli kungenxa yesiphithiphithi esinzulu esidalwe kukutshintsha kwemihla ngemihla kwemigaqo ngamaziko. Umhlambi ulahlekiswa ngumalusi wawo kwaye izinja zakhe zingumhlambi odidekileyo ngokwenene.
Kuyaziwa ukuba isigaba sesibini se-COVID-19 e-Italiya kungenxa yokunqongophala kokubona kwangaphambili kwezopolitiko ekunikezeleni inkululeko eyaneleyo kumaTaliyane ngexesha lasehlotyeni elidlulileyo, elithe laphela ngoqhaqho olukhulu losulelo kunye nokufa.
Le mpazamo inye ifuna ukuphindaphinda Kumsitho weeholide zeKrisimesi kunye nokuphela konyaka. “Ukuziqhelanisa nokunxiba” kutshanje kwimpelaveki ephelileyo ngokukhanya okuluhlaza ngaphambi kokuba kuthengwe iKrisimesi, oogqirha namaziko othusayo malunga nokoyika ukonyuka kokosuleleka kunye nokusweleka (kutsha nje), kwakhona ngenxa yabo bakhokela umhlambi.
Ngelixa iJamani inyanzelise i-oda eqinileyo yokutshixa kubemi bayo kumsitho weeholide ezizayo kude kube nge-10 kaJanuwari, umzekelo olandelwe ngamanye amazwe aseYurophu, abezopolitiko base-Italiya basathandabuza ukuba mabenze ntoni. Emva kokuqinisekisa kumaTaliyane ukuba KULUNGILE ukuhamba ngaphakathi kwemida yemimandla etyheli kwilizwe liphela, kwaxelwa ukuba kunokwenzeka ukucinga kwakhona, kwaye ukuza kuthi ga ngoku iintlanganiso zemihla ngemihla ziyenzeka kwisigqibo sokugqibela.
Olu bhideko lubeke amawakawaka abantu ukuba baqeqeshe uhambo noololiwe kunye neemeko ezinzima kunye nokujamelana noloyiko lwabasebenza ngokutya kunye nabarhwebi. Akuncinci kwezi zinto zixhalabisayo kukukhuthazwa kwabakhanyelayo.
Ingoma kaMameli (okanye "Abazalwana baseItali")
Ngumhobe wesizwe apho elinye lamaqonga alo athi: "Siqokeleleni." Ngolwimi lwenkulungwane yeshumi elinethoba lukaMameli, kuthetha ukuba "sigcine umanyano." Kuyabonakala ukuba ayingawo onke ama-Italiya awaziyo umhobe, kwaye akukho nto yenziwayo ukubakhumbuza ngawo.
Iingoma zeNgxelo kaMameli yaBantwana
Ngokomthetho, ukufundiswa kwengoma ezikolweni kunyanzelekile. Ikwayara yabantwana, ngexesha lomsitho wokuvula we-Expo 2015, watshintsha isiphelo sokuqhubeka kwengoma kaMameli ngale ndlela: ivesi, ukusuka "sikulungele ukufa" yaba "sikulungele ukuphila," kubizwa i-Itali. Ngaba siyafuna ukulisusa eli themba ebantwaneni?
Isibhengezo soMhlaba soLuntu
Isibhengezo seHlabathi samaLungelo oLuntu (i-UDHR) luxwebhu olukhuthazayo lomthetho wamanye amazwe ngamalungelo omntu angenakuhluthwa, iseti yemilinganiselo kwisiseko sempumelelo yoluntu kule minyaka ingama-70 idlulileyo. U-Eleanor Roosevelt wayibiza ngokuba “yiMagna Carta yoLuntu.”
"Amalungelo oluntu angenakuthelekiswa nanto" - kule meko, urhulumente kufuneka abeke iliso!
Njani iJapan igcina usulelo luphantsi
IJapan, ilizwe elinabemi abaninzi elinabemi abazizigidi ezili-126 kunye neyona pesenti iphezulu yabantu abadala ehlabathini, ukuza kuthi ga ngoku sele inenani eliphantsi kakhulu lokusweleka kwabantu kwi-COVID-19. Kukho konke okukhoyo, ukusweleka kwe-2,446 (ngaphantsi kunangosuku olunye e-United States ngeli xesha), ngaphandle kokubhenela kwisicwangciso sobuchule sovavanyo, "ii-3Ts" ezidumileyo ezihlala zibhalwa malunga. Endaweni yoko, iJapan ixhomekeke kwizinto ekuthiwa zii “3Cs” ekufuneka zithintelwe: “iindawo ezivaliweyo, iindawo ezixineneyo, kunye nezicwangciso zonxibelelwano ezisondeleyo.” (imvelaphi: ilCorriere.it)
Enye yezinto ezikhethekileyo kubhubhane we-COVID-19 kukuba ukubetha phantse umhlaba wonke ngaxeshanye, kuye kwabonisa umahluko kwindlela amazwe ahlukeneyo ahlangabezana ngayo nengxaki yezempilo nakwiziphumo abazifumeneyo. Kwimpikiswano yase-Italiyane, kuye kwakho intetho eninzi ngecala laseSweden okanye - ngokuchaseneyo - ngesicwangciso-qhinga saseMzantsi Korea, kodwa phantse akukho kwanto yaseJapan. I-Economist iyakugubungela oku, nangona kunjalo, kwinqaku apho kunokufundwa khona izifundo eziluncedo e-Itali (kunye nokwazisa ngemida yabo).
Ukongeza kwii-3Cs, urhulumente wase-Japan ulumkisa ngeengozi ezi-5 ezibandakanya izidlo ezinotywala, ukusela kunye nokutya kumaqela angaphezulu kwe-4, kunye nokuthetha ngaphandle kobuso buso kufutshane. Ewe, oku kuqonda bekungayi kuba luncedo ukuba abantu abaqhelekileyo abayihoyi. Kodwa amaJapan amamela ingcebiso zikarhulumente ukuba bahlale ekhaya kwaye babeke bodwa ukuba babonisa iimpawu zecoronavirus, nokuba ezi zilumkiso azinalo ixabiso elisemthethweni.
Le yimigaqo enokulandelwa e-Itali, kodwa eyona nto iphambili yile. Ngaba i-Italiya ikulungele ukuyenza? Urhulumente wase-Italiya, ngokunyanzelisa isohlwayo, ubonakalisile ukuba akabathembi abemi bakhe. Kodwa into elahlekileyo kukunxibelelana okucacileyo nokungathandabuzekiyo okuvela kumaziko. Mhlawumbi i-Italiya kufuneka iqale apho.